ဘ၀ ဒသန – Page 78 – Popular News
မိနစ်ပိုင်းအတွင်း လူကြိုက်များသွားတဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့ ရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေရဲ့ ကဗျာလေ
သားသမီးတွေကလှည့်မကြည့်လို့ တဲစုတ်လေးထဲမှာသာ ချို့တဲ့စွာနေထိုင်နေရတဲ့ အဘိုးအဘွ
သားသမီးတွေကလှည့်မကြည့်လို့ တဲစုတ်လေးထဲမှာသာ ချို့တဲ့စွာနေထိုင်နေရတဲ့ အဘိုးအဘွာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ၊ မနီလာမြို့ မှာ နေထိုင်တဲ့ အဘိုးအဘွားစုံတွဲဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ခက်ခဲလွန်းလှတဲ့အဖြစ်အပျက်ကို ရေဒီယိုအစီအစဉ်တင်ဆက်သူကတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် ၊ social media ပေါ်မှာအတော်လေးကိုလူပြောများတဲ့အကြောင်း အရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဆိုပါစုံတွဲမှာ သားသမီး4ယောက် ရှိပါတယ် ၊ သို့ပေမဲ့လည်း သားသမီး3ယောက်က မိဘကို လုံးဝလှည့်မကြည့်သလို ၊ ဂရုလည်းမစိုက်ကြပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ကျန်ရှိနေတဲ့ သား 1 ဦးထံ မှီခိုပြီး နေထိုင်နေကြရတာပါ ။သို့ပေမဲ့လည်း အဆိုပါ Read more
(7) ရက် သားသမီးတွေရဲ့ အချစ်ရေးက ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ ..? ဖတ်ကြည့်ပါ
(7) ရက် သားသမီးတွေရဲ့ အချစ်ရေးက ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ ..? ဖတ်ကြည့်ပါ ( ၇ ရက်သားသမီးများအားလုံး အတွက် ၊ ရာဟုဖွားများ ဗုဒ္ဒဟူးကိုပဲ ကြည့်ပါ။) တနင်္ဂနွေ ၊ သောကြာ သားသမီးတွေအချစ်ရေး ကံမကေ ာင်းဘူး ကိုယ်မျှော်လင့် ထားသလို ဖြစ်မလာတတ်ဘူး။ ကိုယ်ထင်ထားတာ နဲ့ လွဲသွားရတတ်ပါတယ် ။ တနင်္လာ ၊ ဗုဒ္ဒဟူး သား သမီးတွေကတော့ချစ်သူနဲ့ အဆ င်မပြေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်ပြီး ပြတ်မလိုလိုနဲ့ နောက်တော့ ပြန်အဆင်ပြေသွားရ Read more
နေ့တိုင်းသုံး တဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ကို ရေနွေး စိမ်ကြည့်လိုက်သော အခါ..(အားလုံးပဲ သတိထား ကြပါ)
နေ့တိုင်းသုံး တဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ကို ရေနွေး စိမ်ကြည့်လိုက်သော အခါ..(အားလုံးပဲ သတိထား ကြပါ) မြန်မာပြည်က ငွေစက္ကူများ။အိတ်ကပ်ထဲကအန္တရာယ်ကောင်။ သူတို့ဆီကနေလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် က ကူးမယ်ဆိုတာ မယုံစရာမရှိပါဘူး။ ပိုက်ဆံပေါ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ၉ ရက်လောက် နေနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်…. ခုပို က်ဆံတွေဆိုရင် သိပ်ပြီးညစ်နွမ်းနေတာတွေ မပါသေးပါဘူး။ ဒါတောင်ရေနွေးနဲ့စိမ်လိုက်တာမှာ အဲ့လောက်ညစ်နေပါတယ်။ ငွေကိုလက်နဲ့မကိုင်ပါနဲ့…။ ပြန်အမ်းငွေမကိုင်ရအောင် ကို‌ယ်ပေးတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ အစွန်းထွက်မလိုအပြတ်ဝယ်တာပိုကောင်းပါတယ်…။ ကိုယ်ဝယ်တာ 2700 ဆိုရင် 3000ဖိုးအပြည့် တခုခုဝယ်လိုက်တာမျိုးပေါ့။ တတ်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ cashless သွားပါ။ Read more
ခြေထောက်ကြွက်တက်တာကို (၅)မိနစ်အတွင်းသက်သာအောင်လုပ်နည်း ခြေထောက်ကြွက်တက်တာဟာ လူတိုင်းနီးပါးကြုံဖူးတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။ နာကျင်ပြီးခံရခက်လွန်းတဲ့အပြင် ပြင်းထန်လွန်းတဲ့အခါ အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ရုaတ်တရက်ကြွက်တက်တဲ့အခါ ချက်ချင်းသက်သာအောင်လုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုတ်တရက်ကြွက်တက်လာရင်သက်သာအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ ငါးမိနစ်အတွင်း ကြွက်တက်တာကိုပျောက်ကင်းစေမယ့် အရေးပေါ်နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ကြွက်တက်တဲ့အခါ ခြေသလုံးနေရာက မခံမရပ်နိုင်အေ ာင်နာလာတဲ့အတွက် ခြေထောက်ကိုကွေးပြီးဖိထားဖို့ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့။ ခြေထောက်ကိုဆန့်နိုင်သလောက်ဆန့်ထားပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုလဲချလိုက်ပြီး ခြေထောက်ကို အမြင့်နေရာတစ်ခုခုမှာတင်ထားပေးပါ။ ခြေထောက်ကိုအမြင့်မှာ တင်ထားဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ ခြေဖဝါးကိုနှိပ်ပေးပါ။ ပြီးရင် တဘက်အပါးတစ်ထည်ကို ရေနွေးထဲစိမ်ပြီးရေစင်အောင်ညှစ်ကာ ခြေသလုံးနေရာမှာကပ်ထားပေးပါ။ ရေနွေးမရှိဘူးဆိုရင်လည်း ရေအေးအေးမှာတဘက်ကိုစိမ်ပြီး ရေစင်အောင်ညှစ်ပြီးကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ရေခဲတုံးလေးတွေကို တဘက်နဲ့ထုပ်ပြီး ကြပ်ထုပ်ထိုးသလို လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ Read more
မနက် စောစော အိပ်ရာမထတတ်တဲ့သူတွေ ဒီစာစောင်လေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ စောစောထတဲ့ငှက်က အစာပိုဝတယ်” တဲ့။ အဲဒီလိုပဲ လူသားတွေမှာလည်း ဝီရိယရှိရှိနဲ့ စောစောထ၊ ဘဝအစီအစဉ်တွေအတွက် မနက်ခင်းတွေကို အကောင်းဆုံး အသုံးချနိုင်တဲ့သူတွေက အောင်မြင်မှုရဖို့ ပိုမို လွယ်ကူတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မနက်စောစောဆိုတာ အရုဏ်တက်ချိန် ၄-၅နာရီကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မနက် ၆နာရီလောက်ထရင်ကို တစ်နေ့တာအတွက် ကောင်းကောင်းလုံလောက်နေပါပြီ။ မနက် ၆နာရီ အိပ်ရာထသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ ၁။ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စတွေကို ထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့ အချိန်ပိုရလို့ ၂။ တစ်နေ့တာအတွက် အချိန်ဇယားဆွဲဖို့ Read more
စိတ်ထိခိုက်၊စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သတိရသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ(၇)ခု
စိတ်ထိခိုက်၊စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သတိရသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ(၇)ခု တခါတလေ အကြောင်းပြချက် မရှိပဲ “လူတွေအားလုံးက ကိုယ့်ဘက်မှာ မရှိဘူး၊ တလောကလုံးမှာ ကိုယ့်လောက် အသုံးမကျတဲ့သူ၊ ကံဆိုးတဲ့သူ မရှိဘူးရယ်” လို့ တွေးမိတဲ့ အခိုက်အတန့် လူတိုင်းမှာ ရှိကြပါလိမ့်မယ် …။ အမြဲတမ်း ပျော်ချင်ပေမယ့် မပျော်ရသလို စိတ်ခံစားမှုတွေ ပြင်းထန်ပြီး အလိုလို ဝမ်းနည်းမိတဲ့ ကာလကို ဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက်ဆိုရင် အောက်ပါ အချက်တွေကို သတိရသင့်ပါတယ်နော် …။ (၁) နာကျင်မှုမရှိဘဲ မရင့်ကျက်နိုင်ပါဘူး။ ဘဝမှာ ကြုံလာရတဲ့ အခက်အခဲ ဒုက္ခတွေကသာ Read more
ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်များဟာ နယ်နယ်ရရ တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ သင့်ဘေးမှာ ရှိနေရင်တော့ ဆွဲထားလိုက်ပါ
ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်များဟာ နယ်နယ်ရရ တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ သင့်ဘေးမှာ ရှိနေရင်တော့ ဆွဲထားလိုက်ပါ ဒီ လို လက္ခဏာပိုင်ရှင် များ ဟာန ယ်နယ်ယယတော့မ ထင်လိုက်ပါနဲ့ သင့်ဘေးမှာ ရှိနေရင်တော့ ဆွဲထားလိုက်ပါ ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်များဟာနယ်နယ်ရရတာ့မထင်လိုက်ပါနဲ့ ပါရမီရှင်တွေပါ သာမန်လူပိန်းတွေအလိမ်ခံနေရတာသိသလိုအနာဂတ်ဖြစ်မည့်အရာတွေကိုကြိုတင်တွက်ဆနိုင်သူများပါ အဲဒီလို X သင်္ကေတပါတဲ့ လက္ခဏာပိုင်ရှင်ဟာ ကြီးပွားချမ်းသာပြီး အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်တက်တယ် ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ မချမ်းသာသေးရင်လည်း ကြီးလာတဲ့အခါမှာ ပြည့်ပြည့်စုံနေရတက်ပါတယ်၊ နောက်ဆဌမအာရုံလိုခေါ်တဲ့ အကြားအမြင် ရတက်တယ် ဘယ်သူတွေကိုယ်အပေါ်ဘယ်လိုဆက်ဆံတယ် ချက်ချင်းသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ မသိသလိုနဲ့ အသာလေး နေတတ်တယ် အကြီးအကဲ ဖြစ်တက်တဲ့သူတွေမို့ Read more
မိသားစုတွေ ပစ်သွားလို့ စာအုပ်၊ ဓာတ်ခဲနဲ့ မီးခြစ်လေးတွေ ကိုယ်တိုင် ရောင်းကာ ပင်ပင်ပမ်းပမ်း နေထိုင်စားသောက် နေရှာတဲ့ အ ဖိုး
Zawgyi ပြည်သူတွေအားလုံးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေထဲမှာ အဆိုးဆုံးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးကြပ်တည်းမှုတွေကြောင့်စားဝတ်နေရေးပြဿနာတွေကလည်းအများအပြားပါပဲ..။ လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အချင်းချင်း လက်လှမ်းမှီတတ်နိုင်သလောက်လှူဒါန်းမှုတွေအဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ကာဖေးမကူညီနေကြပေမယ့်လိုအပ်မှုတွေများစွာရှိနေသလိုသက်ကြီးရွယ်အိုအဖိုးအဖွားတွေအတွက်လည်း အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေကြပါတယ်.. မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြို့နယ်လမ်း၉၀ထိပ်မှာ တွေ့ရတဲ့အဖိုးတစ်ယောက်ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးကာစိတ်ပုံမှန် မဟုတ်ပေမယ့်စားဝတ်နေရေးအတွက်စာအုပ်၊ဓာတ်ခဲ၊မီးခြစ်နဲ့စူပါဂလူးတွေရောင်းကာကိုယ်တိုင်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရပြီးပင်ပင်ပမ်းပမ်း နေထိုင်စားသောက်နေရှာရတာတွေ့ရပါတယ်..။ အဖိုးကိုမိသားစုကပစ်သွားတာဖြစ်ပြီးစိတ်ပုံမှန်မဟုတ်တော့ ဈေးကလည်းပါးစပ်ထဲရှိသလိုပြောတတ်ပြီးနေပူထဲသွားလာဈေးရောင်းနေပေမယ့်တစ်နေကုန်ဝယ်မယ့်သူမရှိတဲ့နေ့တွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်..။ “အဘရောင်းဖို့နည်းနည်းချန်ထားအုံးလေ 😍 ရဘူးသားကအကုန်လိုချင်တာအဘရဲ့ 😉 ဓာတ်ခဲလေးတွေ ရောင်းတယ်…..စာအုပ်လေးတွေရောင်းတယ်…..မီးခြစ်လေးတွေရောင်းတယ်….. SuperGlueလေးတွေရောင်းတယ်…..ဓာတ်ခဲ တကဒ်….. 2000 Ksစာအုပ် တအုပ်….. 300 Ks။မီးခြစ်တခု….. 500 Ks။SuperGlue တကဒ်….. 1300 Ks အဘစိတ်ကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဈေးတွေကပါးစပ်ထဲရှိသလိုပြောတတ်တယ်ထင်တယ် ဗျ 😥 မိသားစုကပစ်သွားတယ်လို့လည်းပြောတယ် 😢ဘေးဆိုင်ကတော့ပြောပါတယ်…. လာရောင်းနေပေမဲ့ တနေကုန် ဝယ်တဲ့သူရှိချင်မှရှိတာသားရယ် 😪😥 Read more
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အတွက် ၆လပိုင်း တစ်လစာအထူးဟောစာတန်
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အတွက် ၆လပိုင်း တစ်လစာအထူးဟောစာတန်း ယခုလတွင်ငွေကြေးကိစ္စများအတွက်စိတ်ချမ်းသာမည်။ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများပို၍ပြုလုပ်ပေးပါ။ ရတနာဝယ်ယူပါကမိသားစုပိုင်ပစ္စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးမှ ဝယ်ပါအို းအိမ်အဆောက်အဦးကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါက ကြန့်ကြာနေတတ်သည် စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ပါကအောင်မြင်မည် ကိုယ်သဘောအတိုင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ထီပေါက်ကိန်းရှိသည်။ ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်စရာမရှိပါပညာရေးအတွက်ကြိုးစားနေသူများ အချိန်မဖြုန်းဘဲလုံ့လစိုက်ပါအောင်မြင်မှု ရရှိပါလိမ့်မည်နှလုံးသားရေးကိစ္စများ အဆင်ပြေစေရန် ကိုယ်ကလျှော့ ပေးပါ။ ခိုလေးများအစာကျွေးပါ။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ဆံပင်ညှပ်ပါ။ အကျိုးပေးအရောင်မှာ ပုလဲပေါက်ဒီဇိုင်းအင်္ကျီများ၊ရောင်စုံဒီဇိုင်းများဖြစ်သည်။မွေးနေ့တွင်သက်သတ်လွတ်စားပါ။ ကောင်းမှုကုသိုလ်များများလုပ်ပါ။ဆန္ဒများအကောင်အထည်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ Credit Unicode တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အတွက် ၆လပိုင်း တစ်လစာအထူးဟောစာတန်း ယခုလတွင်ငွေကြေးကိစ္စများအတွက်စိတ်ချမ်းသာမည်။ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများပို၍ပြုလုပ်ပေးပါ။ ရတနာဝယ်ယူပါကမိသားစုပိုင်ပစ္စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးမှ ဝယ်ပါအို းအိမ်အဆောက်အဦးကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါက ကြန့်ကြာနေတတ်သည် စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ပါကအောင်မြင်မည် ကိုယ်သဘောအတိုင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ထီပေါက်ကိန်းရှိသည်။ ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်စရာမရှိပါပညာရေးအတွက်ကြိုးစားနေသူများ အချိန်မဖြုန်းဘဲလုံ့လစိုက်ပါအောင်မြင်မှု ရရှိပါလိမ့်မည်နှလုံးသားရေးကိစ္စများ အဆင်ပြေစေရန် ကိုယ်ကလျှော့ ပေးပါ။ Read more
နားလေး၊ နားထိုင်း ရောဂါအတွက် ဆရာတော်ဘုရားပေးတဲ့ ဆေးနည်းကောင်
နားလေး၊ နားထိုင်း ရောဂါအတွက် ဆရာတော်ဘုရားပေးတဲ့ ဆေးနည်းကောင်း လူသားများသည် ”ရုပ္ပတီတိရူပံ” ဆိုသည့်အတိုင်း ရုပ်သဘောသည် အမြဲဖောက်ပြန်နေကြပါတယ်။ ခန္ဓာရှိရင် ဝေဒနာရှိသည်မို့ ယခုတင်ပြမည့်ဆေးနည်းကား ရဟန်းမယ်တော်ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ခဲ့သော နားလေးနားပင်းရောဂါပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ပူအိုက်သော ညများမှာ အသ က်ကြီးသူတို့အတွက် အေးလွန်း၍လည်း မရပါ။ ပူလွန်း၍လည်း မရပါ။ တံခါးပေါက်ဖွင့် အိပ်မိရက်သား ဖြစ်သွားပြီး အ ခင်းကလဲ မခင်းမိလိုက်ဘူး။ နံနက်မိုးလင်းတော့ သားပြောနေသော စကားကို မကြားရတော့။ ပြောသူလဲစိတ်တို၊ အပြောခံရသူ မိခင်လဲ စိတ်တိုပေါ့။ သားဖြစ်သူက Read more
မကြာခဏလက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူး သူတိုင်း ဒီပို့လေးကို ကျော်မသွားပါနဲ့အရေးကြီးလို့ပါ